တော် ,မတတ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » တော် ,မတတ်
Posted by ကြောင်လတ် on Dec 1, 2011 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 10 comments
တနေ့ ကျနော် ကွန်ပျူတာရှေ့ထိုင်နေတုန်း ဒုတိယတန်း တက်နေတဲ့ သားလေးရောက်လာပြီး သင်္ချာ ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ် မတွက်တတ်လို့ လာမေးပါတယ်။ ကျနော်က ရှင်းပြပေးပြီးသူ့ ကိုလိုက်ရေးခိုင်းပါတယ်။ လိုက်မရေးပါဘူး။ သူ့ဆရာမ သင်တာနဲ့မတူဘူးလို့ပြောပါတယ်။ သင်္ချာဆိုတာ ပုံစံအမျိုးမျိုးတွက်လို့ရတယ်၊ တွက်နည်းအဆင့်နဲ့ အဖြေမှန်ဖို့လိုတယ်လို့ ထပ်ရှင်းပြပါတယ်။လက်မခံပါဘူး၊လိုက်မရေးပါဘူး။ ဒါနဲ့အတင်းအော်ငေါက်ပြီးရေးခိုင်းရပါတယ်။ သဘောတရားကိုလည်း နားလည်အောင်ရှင်းပြပါတယ်။ ပုံစံတူ တစ်ပုဒ်ကိုလည်းထပ်တွက်ခိုင်းလိုက်တော့ သဘောပေါက်ပြီးတွက်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ ရေးထားတွက်ထားတဲ့ဟာကို သူသံသယ ရှိနေပုံရပါတယ်။ တအောင့်ကြာတော့ သူ့သူငယ်ချင်းရောက်လာပြီး မင်းတွက်ထားတာမှားတယ်၊ ဆရာမက အဲလိုမတွက်ဘူးလို့ပြောနေသံကြားရပါတယ်၊ ကျနော့ သားက တိုးတိုးပြန်ပြောပါတယ်။ ခနကြာတော့ ကျနော် မသင်္ကာလို့အပြင်ထွက်ကြည့်တော့ စာအုပ်ထဲက ရေးထားတာကို ခဲဖျက်နဲ့ ဖျက်နေတာတွေ့ပါတယ်။ ကျနော်က သားကို မဖျက်ရဘူး ဒီအတိုင်းထားလို့ပြောလိုက်မှ ငိုမဲ့မဲ့နဲ့ ပြန်ရေးနေပါတယ်၊သူ့သူငယ်ချင်းလဲ ပြန်သွားပါတယ်။
ညနေကျောင်းကပြန်လာတော့ သားကပြောပါတယ်၊ ဆရာမက သူ့ ကိုအမှတ်မပေးဘူး၊ပြန်တွက်ခိုင်းတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဘာကြောင့် အဲဒီလိုလုပ်သလဲ စဉ်းစားမရပါ၊ ကျောင်းသားအများကို စာစစ်ရတော့ တစ်ပုံစံတည်းဖြစ်မနေရင် သူအသေးစိတ်လိုက်ပြန်စစ်နေရမှာစိုးလို့လား၊ ကလေးတွေကို စဉ်းစားတတ်တဲ့အကျင့် ကိုလေ့ကျင့်မပေးတော့ဘူးလား၊ အတန်းငယ်နေသေးလို့လား၊ ကျနော်စဉ်စားလို့မရပါ၊ ဒီလိုနဲ့ မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ဖြစ်သွားပါတယ်။
တနေ့ ဆဌမတန်း တက်နေတဲ့ သမီးအကြီး က ဖေကြီး ဒီတပတ်လည်းသမီး ၀မ်းတူတန်း ၀င်တယ် သမီးကိုအရုပ်ဝယ်ပေးရမယ်လို့ ပူစာရင်း အဆင့် လေး ရတဲ့ ရီပို့ ကဒ် ကိုယူလာပြီးပြောပါတယ်။ သမီးကြီးကတော့ စာတော်တယ်ဆိုတဲ့ အနေအထားမှာရှိနေပါတယ်။ သင်္ချာနဲ့ အင်္ဂလိစာ အမှတ်တွေကြည့်လိုက်တော့ ၉၀ အထက်မှာပါ။ ဒါနဲ့ သင်္ချာပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်ကို နဲနဲလှည့်မေးလိုက်တော့ သူမတွက်တတ်ပါဘူး၊ ပုံသေနည်းအချို့ ကို မေးကြည့်တော့ သိနေပေမဲ့ အခြေခံသဘောတရားနဲ့ ဒီပုံသေနည်းတွေ ဘယ်လိုဆက်စပ် အသုံးပြုသလဲ ဆိုတာ သူမသိပါဘူး၊ ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်ကိုအလွတ် ရနေတဲ့ သဘောပါ၊ အင်္ဂလိပ်စာအခြေခံအချို့ ကိုမေးတော့လည်း ယောင်ဝါးဝါး ပါ။သူတို့ ဖြစ်နေပုံ က တွေးတတ်ရေးတတ်အောင် သင်ပေးထားတာမဟုတ်ပဲ နှုတ်တိုက် သင်ပေးထားတဲ့သဘောဖြစ်နေပါတယ်။ သူတို့ ကိုလက်ရှိသင်နေတဲ့ သင်ရိုးညွှန်းတန်း(တလစာ) ကို (ဒီတလအတွင်း) သေချာ သိနေတဲ့သဘောပါ၊ စာသင်ခန်းထဲမှာတော့ ဒီလိုမေးလို့ ဒီလိုဖြေနိုင်တာကို စာတော်တယ်လို့ သတ်မှတ်လို့ ရပေမဲ့ ကျနော်အနေနဲ့ သူ့ကို စာတတ်တယ်လို့ မသတ်မှတ်နိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။ ကျနော့အယူအဆ ကို အများလက်ခံနိုင်ကြပါ့မလားတော့ မသိပါ။ ဒီလိုသင်နေတဲ့ စနစ်တွေကို ပြုပြင်သင့်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ခေတ်ဆရာ/မ တွေလို ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ် ကို အမျိုးမျိုးလှည့်တွက်ပြ၊ အမျိုးမျိုးလှည့်မေး တာတွေ မရှိကြတော့ဘူးလား၊ နားမလည်တဲ့ကလေးတွေကို အိမ်မှာ ခေါ်ပြီးအချိန်ပိုသင်ပေး၊နေမကောင်းရင်ဆေးပါကုပေး၊စတာတွေ မရှိတော့ပါ၊ ကျောင်းဆင်းရင် တချို့နေရာမှာ ကျူရှင်ဖွင့် ၊ ညနေ ရောက်ရင် အချိန်ပိုင်းလိုက်သင်၊ မနက်ကျောင်းမတက်ခင် ကျူရှင်ပြနဲ့ နဘမ်းလုံးနေကြရပါတယ်။
ဒါဘာကြောင့်ပါလဲ၊ အထက်မှာကျနော်ပြောနေတာ ဆရာ/မတွေကို အပစ်ပြောနေတာမဟုတ်ပါ၊ ကျနော်တို့ခေတ်က ဆရာ/မတွေဟာ ကျနော်တို့ ကိုအထက်ကပြောသလို သင်နိုင်ခွင့်ရခဲ့ကြပါတယ်။ အခု အသက် လေးဆယ့်ငါး ၊ငါးဆယ်ကျော်သက်တမ်းတွေပေါ့။ လေးဆယ်အောက် ဆရာ/မတွေနဲ့ အခုမှ အလုပ်ဝင်လာတဲ့ သဆရာ/မ တွေ ဒီအခွင့်အရေးကိုမရကြတော့ပါ။ ကျနော်တို့ခေတ်ကသင်သလို လုပ်နေရင် သူတို့ ရဲ့မိသားစု ဘ၀ရပ်တည်ရေး၊ စားဝတ်နေရေး၊ သူတို့ သားသမီးတွေ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ၊ ပြည်သူတွေ(အော်နေကြတဲ့သူတွေ) ဒါကို အမြင်မှန်နဲ့သိစေချင်ပါတယ်။
တကွက် ကာတွန်းတွေမှာ၊ လူပျက်တွေပျက်တဲ့အခါတွေမှာ၊ သတင်းဌာနတွေကနေ အော်နေတဲ့အထဲမှာ ဆရာ/ဆရာမတွေ ကျူရှင်သင်နေတဲ့အကြောင်းတွေ ၊ရေးကြ၊ပျက်ကြ၊အော်ကြ လုပ်နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလိုဘာကြောင့်ဖြစ်နေရတာလဲဆိုတဲ့ အခြေခံ အရင်းအမြစ် ကို မြင်အောင်ကြည့်ပြီး/ရှာပြီး ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲ၊ ဘယ်လိုလုပ်ပေးသင့်သလဲ၊ ဘယ်လိုလုပ်ပေးရင်ကောင်းမလဲဆိုတာ ဘယ်သူမှ ပြောသံ အော်သံမကြားရပါ။ ဆရာ/မ တွေကျူရှင်မသင်ရ ဆိုတဲ့အမိန့်တွေ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ကထုတ်တာ ကြားဖူးလိုက်ပါတယ်၊ ရေရှည်မအောင်မြင်ပါဘူး။ ဘယ်အောင်မြင်မလဲ၊ ကျူရှင်မသင်ရရင် အလုပ်ထွက်ပြီးကျူရှင်ပဲ ပြစားတော့မှာပေါ့။ အကြောင်းအရာ တိုင်းမှာ အခြေခံ အရင်းအမြစ်ရှိပါတယ်၊ အဲဒါကို ပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းမပေးသမျှတော့၊ ဒီကိစ္စတင်မဟုတ် ၊ဘယ်ကိစ္စမှ …………………
(ပုသိမ်မြို့ မှ ဆရာဦးလှကြည်၊ ဆရာမ ဒေါ်မြသွင်၊ဆရာမဒေါ်စန်းစန်းဝင်း၊ ဆရာမ ဒေါ်ကြည်ကြည်မြင့် (ကွယ်လွန်)၊ရန်ကုန်ပြောင်းသွားတဲ့ ဆရာမ ဒေါ်အေးနှစ်) တို့ကို ဒီစာဖြင့် သတိတယ ကန်တော့ပါတယ်။
ကျွန်တော်လဲ အဲဒီကိစ္စ ပြောချင်နေတာ ကိုကြောင်လတ် ပြောတာ အတော်ဖြစ်သွားတယ်
သင်္ချာမှ မဟုတ်ပါဘူး ဘာသာတိုင်းကို အဲဒီလို ဖြစ်နေတာပါ
အင်္ဂလိပ်စာ စာလုံးပေါင်း မှားလို့ ပြင်ပေးရင်တောင် ဆရာမ ပြောတာအမှန်ပဲဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတယ်
နောက်ဆုံး စူစမ်းတဲ့ဥာဏ် ရအောင် သင်ပေတဲ့ သဘာဝ သိပံတောင် ကျောင်းက သင်တဲ့အတိုင်းကလွဲရင် လက်မခံဘူး ၊ အပင်သေး အပင်ကြီး ဆိုတာမျိုးမှာ ကျောင်းက သင်တဲ့ထဲ မြက်ပင်က အပင်သေးပါလို့ မပါရင် ဘယ်လိုပြောပြော မရတော့ဘူး ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ
ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့ စကားတခွန်း ပို့စ် တစ်ခု နဲ့ ဘာမှ ဖြစ်မလာနိုင်သေးပေမဲ့ ၊ ကျွန်တော်တို့ အသံတွေ များလာရင် ခေတ်နဲ့ လိုက်ရောညီထွေဖြစ်အောင် မဖြစ်မနေ ပြောင်းကိုပြောင်းလာရမှာပါ
တော် , မတတ်
ငါးပါးရော သံဃာစင်ပါမှောက်တော့ တာပါဘဲ..။
ပညာရေးက ခုထိ တစ်ကြောင်းဆွဲ ပဲရှိနေသေးတယ်…။ ကြောင်လတ်ရေ့………။ ပိုဆိုးလာတာက စာမေးပွဲအောင်ဖို့ ပဲ အဓိက ထားသင်နေတာ….။ တစ်ကယ် တတ်မတတ် ကို အရေးတစ်ယူမရှိတာပဲ…။ ခုဆိုရင်ကြားနေရတယ်…။ ကျူရှင်တွေ ဘော်ဒါတွေမှာ ရှိပြီးသား သင်ရိုးကို ကုန်အောင်မသင်ဖူးတဲ့…..။ စာမေးပွဲမှာမေးတတ်တဲ့ အပိုင်းတွေကိုလောက်ပဲ ရွေးပြီးသင်နေကြသတဲ့….။ နို့ ဒီသင်ရိုးတွေ ဘာကြောင့် ပြဌာန်းနေမလဲ….။ ဘယ်လောက်ပဲ အဆင့်ရှိတဲ့ သင်ရိုးဖြစ်ပါစေ အဆင့်ဆင့် သိသင့် တတ်သင့်တာလေးတွေတော့ရှိပေမပေါ့………. နော့ …။ ဒါကို ကျော်လွှားပြီး စာမေးပွဲမှာမေးတတ်သာလေးလောက်ပဲ ရွေးပြီးသင်တယ်…..ဆိုတော့ ဒါကျောင်းသားကိုရော မိဘကိုရော စော်ကားလိုက်တာပဲ…….။ ပိုက်ဆံယူပြီးတော့…………. ။ အဲဒိတော့ ကျောင်းသားတွေကလည်း သင်ရိုးအကုန်သင်တဲ့ ကျောင်းထက် ရွေးပြီးနဲနဲ ပဲသင်တဲ့ ကျူရှင်နဲ့ ဘော်ဒါကိုပဲ သွားကြတယ်…။
ကိုရင်၊ ကိုနို၊ ကိုနီ၊ မအေး၊ တို့ရေ..ကျနော်တို့ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ဘ၀၊ ကျနော်တို့တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ ဆရာ/မ တွေနဲ့ အခု ကလေးတွေဘ၀ က အကွာကြီးကွာသွားပါပြီ ။ ကိုးဆယ်တတ်သူကဆရာပြန်လုပ်၊ကိုနေပြောသလိုလျှော့သင်၊ ရှစ်ဆယ်ငါးပဲတတ်၊သူကဆရာပြန်လုပ်၊ ပြန်လျှော့သင်……….အဲဒီသံသရာကိုလည်လိုက်တော့…………
The grate expectations ပေါ့ …..။
အားလုံးပြောနေတာက ကောင်းလွန်းနေတော့ ….
ဆရာအောင်သင်းရဲ့ အင်တာဗျူးလေးကို မျှဝေလိုက်ပါတယ် ….
ဆရာအောင်သင်းသည် ၁၉၅၈ ခုနှစ်က ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ ကျောင်းသားတဦးဖြစ်ပြီး၊ ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် နည်းပြ၊ ၁၉၆၅ ခုနှစ်တွင် ပြင်ဦးလွင် စစ်တက္ကသိုလ် မြန်မာစာဌာန၏ လက်ထောက်ကထိကအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ယင်းအပြင် အလွတ်ပညာသင် အထက်တန်းကျောင်းများတွင် မြန်မာစာ နည်းပြအဖြစ် သင်ကြားပို့ချပေးခဲ့သည်။
ဆရာသည် ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်သည့်ဆောင်းပါးများ လူငယ်များတိုးတက်ရေးအတွက် စာပေများ စသည့် စာအုပ်၊ ဆောင်းပါးများ စုစည်းမှုနှင့် ဘာသာပြန် စာအုပ်ပေါင်း ၄ဝ ကျော်ကို ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဆရာသည် အသက် ၈၅ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး လူငယ်ပြုပြင်ရေးစာပေများ ရေးသားနေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ လူငယ်ပြုပြင်ရေး စာပေဟောပြောပွဲများကိုလည်း လိုက်လံဟောပြောနေသည်။
aungthin“ပညာရေးဌာနမှာ အရင်တုန်းက Senate ရှိတယ်၊ Council ရှိတယ်။ Senate နဲ့ Council က ဆုံးဖြတ်တာ။ သမ္မတတို့ ဝန်ကြီးချုပ်တို့က
နိုင်ငံရေးနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးဘက်က။ ဘာမှ တက္ကသိုလ်ကို ပြောခွင့်မရှိဘူး။ သူက ထောက်ပံ့ပေးရတာပဲ ရှိတယ်။ တက္ကသိုလ်က သူ့ရန်ပုံငွေနဲ့သူ သူ့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သူ။ ကျနော်တို့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲမှာ ကိုယ်ပိုင်ဆေးရုံ ရှိခဲ့တယ်၊ ကိုယ်ပိုင် မြူနီစီပယ်လိုဟာမျိုး ရှိတယ်၊ အလုပ်သမား တန်းလျားတွေ ရှိခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့ကို Senate က ပြဋ္ဌာန်းတယ်၊ Council က အုပ်ချုပ်တယ်။ ဒီလိုသွားခဲ့တာ အစိုးရက ဘာမှ ပြောပိုင်ခွင့် မရှိဘူး။ အင်္ဂလိပ် အုပ်ချုပ်တဲ့ လက်ထက်မှာတောင် ဘုရင်ခံက ဘာမှ ပြောပိုင်ခွင့် မရှိဘူး။ ခင်ဗျားပြန်စဉ်စားရင် သိလိမ့်မယ်။ ၁၉၂ဝ သပိတ်မှောက်မှု ပေါ်ပေါက်ခဲ့တော့ ဘုရင်ခံက
ကန့်ကွက်ခဲ့တာပဲ။ ဒါပေမဲ့ ရမယ့်မရဘဲနဲ့”
ပညာရေးအခြေအနေ နိမ့်ကျမှုနဲ့ တခြား ဆိုးတဲ့အခြေအနေတွေဟာ အစိုးရစီမံခန့်ခွဲမှု ညံ့တာကြောင့်လို့
သင်ကြားရေစနစ်တွေမှာ ကလေးဗဟိုပြုသင်ကြားရေးစနစ်၊ ဆရာဗဟိုပြု သင်ကြားရေစနစ် ဆိုပြီးတော့
ပြောကြဆိုကြပါတယ်။ ဆရာကကော ဘယ်သင်ကြားရေးစနစ်ကို အလေးပေးလဲ။
တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရတွေအပေါ်မှာ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး တိုးတက်လာဖို့ ဘယ်လောက်ထိ
ပညာရှင်တစ်ယောက်ရဲ့ ကျနော့ထက်ကောင်းတဲ့၊တိကျတဲ့ စကားလုံးတွေပါတဲ့ အင်တာဗျူးလေးကို ချီးမြှင့်ပေးတဲ့အတွက် ကိုကင်းကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဒီစာလေးကို ကူးယူပြီးဖြန့်ဝေပေးခွင့်ရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ကျနော် ကူးယူလိုက်ပါတယ်။
ကျောင်းသားတွေကလဲ စာကိုမလေးစားကျတော့ဘူးဗျ (uni students) …စာမေးပွဲနားနီးမှ လုပ်လိုက်မယ်လေ…ကိုယ်ကစာတွေကြိုကြည့်ထားလိုက်မိရင်ဘော်ဒါတွေက ကိုယ့်ကိုဝိုင်းပြောလိုက်ကြတာ…ငတုံးကြီးအတိုင်းဘဲ..ကံကောင်းလို့သာအောင်သွားမယ် ဘာမှတတ်သွားကြမှာ မဟုတ်ဝူး…ငယ်ငယ်တုန်းကလဲ ဘောင်ခတ်ခံခဲ့ရတာဘဲ….၃မျိုးသင်ရင် ၃မျိုးမှတ်ပြီး ၃မျိုးနဲ့တွက်လိုက်တယ်… အေးရော………:D
ကြည်ဖြူ တူမလေးက အခု တတိယတန်းမှာလေ …
ဒုတိယတန်း မှာတုန်းကတော့ ၀ါကျဖွဲ့ရာမှာ သူမ စိတ်ကူးလေးတွေ ဖွဲ့တာကို တွေ့ခဲ့ရတယ် …
ဒါပေမယ့် အခု တတိယတန်း အရောက်မှာ ၀ါကျဖွဲ့တာတွေက ပုံနှိပ်ထဲက စာသားတွေနဲ့ ကွက်တိ ရေးနေတာကို တွေ့ရလို့
သမီး ကြိုက်တာ ဖွဲ့လို့ မရဘူးလားလို့ မေးတော့ … အခု သင်ရတဲ့ ဆရာမက ပုံနှိပ်ထဲကအတိုင်း မဟုတ်ရင် အမှတ်မပေးလို့ တဲ့ …